शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको कुरा गर्दा समाजवाद उन्मुख राज्य दिमागमा रहनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अहिलेसम्म अवलम्बन गरिएको शिक्षा प्रणाली समाजवाद उन्मुख नभएर पूँजीवाद, व्यक्तिवाद अझ उपभोक्तावाद उन्मुख रहेको दावी गरे । प्रचण्डले अब नेपालमा स्वरोजगार र आत्मनिर्भर शिक्षा प्रणालीको खोजी गर्न पनि शिक्षकहरुसँग आग्रह गरे । शिक्षक र राज्यलाई दोष दिने दुबै बेठीक भएपनि शिक्षा सुधारको मुख्य जिम्मेवारी त राज्यको नै पहिलो हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा डा. रमेश भट्टराईले नेपालको विशिष्टतामा समाजवादी शिक्षाको प्रारुप र डा. लेखनाथ शर्माले ग्रेडिङ प्रणाली र विषयगत उपलब्धी प्रमाणीकरण विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । दुई कार्यपत्रमा शिक्षाविद् प्रा.डा. वाशुदेव काफ्ले र प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले टिप्पणी गरेका थिए । कार्यक्रममा एक हजारको हाराहारीमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाविद्, कर्मचारीलगायतका शैक्षिक सरोकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।